IPinterest kunye neWordPress
NgoLwesibini, Matshi 27, 2012 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 UAustin Gunter
IPinterest iyeyona nto intsha inkulu kunxibelelwano lwasentlalweni. I-Pinterest, kunye nabanye, njengeGoogle + kunye ne-Facebook, bakhule isiseko somsebenzisi ngokukhawuleza kunokuba abasebenzisi banokufunda indlela yokusebenzisa le nkonzo, kodwa isiseko esikhulu somsebenzisi sithetha ukuba ukungahoyi inkonzo yinkohliso. Lithuba lokukhulisa uphawu lwakho. Sisebenzisa iPinterest kwiinjini zeWP, ke ndiza kuba ndikhetha uphawu lwethu eposini njengomzekelo oluncedo.
Kuqala, uphawu lobuchwephesha usebenzisa iPinterest alunangqondo… Kuba asizenzi iilokhwe zomtshato, kwaye asithengisi indawo yokupheka, kutheni sisebenzisa iPinterest? Siyayisebenzisa kuba iPinterest inamandla amangalisayo okunyusa i-SEO, kwaye ikhulise uphawu lokuqalisa kwi-intanethi, kwaye abathengisi abakwi-Intanethi baya kufuna ukuyisebenzisa kulwakhiwo lwekhonkco.
I-Pinterest ngumqondo olula, owenziwe ngobunono.
Iiphini yimifanekiso oyongeza kwiPinterest, edityaniswe kwenye indawo kwiwebhu, okanye ilayishwe kwikhompyuter yakho. Iphini liqukethe i-backlink kumxholo wokuqala. Ungayifaka imifanekiso kwaye nabani na angafaka izimvo kwiphepha. Naliphi na iphepha elinomfanekiso linokucofa.
EBhodi ziibhodi zekhokho ezibonakalayo apho abasebenzisi kunye neebrendi banokubeka khona izikhonkwane. Iibhodi zinokucwangciswa ngokwamacandelo, njenge- "Barbecue Delicious," kunye ne "Killer Twitter Avatars," okanye "infographics."
Ukuguqula yile nto kanye evakala ngathi. Naliphi na ipini "inokuphinda ibhalwe" kwibhodi entsha ukuze ilandelwe ngomnye umntu. Yilapho iPinterest iba yintsholongwane. Ukuba abasebenzisi baqala ukuphindaphinda ngokungaguquguqukiyo, umxholo wakho, kunye negama lakho, lisasazekile kwinethiwekhi, ukwenza i-backlink entsha ngalo lonke ixesha.
I-Pinterest iyamangalisa, kuba NALiphi na iphepha lomxholo elinomfanekiso, linokwabelwana ngalo kwibhodi yezitshixo, kwaye loo nto yenza ukuba kube lula ukuqokelela umxholo omkhulu endaweni enye. Kubalulekile ukuba ucinge ngaphaya kwemifanekiso yeekeyiki zomtshato. Unokwabelana ngezithuba zebhlog, imixholo yeWordPress, inkomfa yakho yokuthimba kwakhona, kubandakanya imifanekiso yentetho oyinike yona.
Ngalo lonke ixesha umsebenzisi efaka kwakhona umxholo wakho, ufumana enye i-backlink.
Ke usebenza njani ukuphinda ubeke izikhonkwane? Wenza i-hypothesis malunga nomxholo, iimveliso, iinkonzo, kunye nokuzonwabisa abanomdla kuzo abasebenzisi bakho, emva koko uqale ukuwucofa. Kungathatha ixesha ukufumana ukubandakanyeka okwaneleyo komsebenzisi, kodwa ukuba unomxholo olungileyo, ngumcimbi wexesha kuphela.
Qonda abathengi bakho
Kwinjini yeWP, abathengi abaninzi bangoku ngabaphuhlisi beWordPress. Banobuchwephesha obuphezulu, kwaye bafuna umxholo onokubenza babe ngabacebisi abangcono kunye noyilo lwabaphuhlisi kunye nabacebisi abangcono. Uya kufuna ukwenza iprofayile yomthengi wakho, kwaye emva koko ucofe umxholo ohambelana nomdla wabo.
Njengomzekelo Nazi ezinye zeephinibhodi esiqala ngazo, kunye nezizathu zazo nganye.
Ukujonga endle: Iifoto ezingeniswe ngumsebenzisi zinxibe ii-t-shirts ezinophawu. Ungacela le mifanekiso nanini na inkampani yakho ikunika i-swag enophawu.
I-WordPress eNtsha: I-noob yanamhlanje yi-ninja yangomso… sikholelwa ekukhuliseni italente kunye nobungcali… Akunakwenzeka ukuba ngubani onokuqala inkampani yakhe kwixa elizayo.
Izihloko eziBalaseleyo: Imixholo ludidi oluphantsi, kodwa ndisebenza nzima ukongeza imixholo esombulula iingxaki ezinomdla ngeendlela ezintle, okanye ziyile ngokumangalisayo.
Ikhowudi Iziqwenga FTW: Umzekelo omkhulu wendlela yokuthumela umxholo wobugcisa kwiPinterest. Logama nje kukho ifoto kwiphepha, ndingathumela iikhowudi zekhowudi okanye uphuhliso lwesiza.
Inkxaso yeTekhnoloji yiNtengiso: Inkcubeko yethu yenkampani ibeka phambili inkxaso kwintengiso, kwaye oku sikubeka kwintengiso yethu. Ibrand yakho iya kuba nexabiso eliphambili elenza lahluke, kwaye ungayifaka apha.
Iiplagi zethu ezikhethiweyo: Uluhlu lwezixhobo zeeplagi esivavanyileyo kwaye sicebisa ukuba abaphuhlisi beWordPress basebenzise.
Ingxelo yabathengi: Lonke uphawu kufuneka lubonakalise ingxelo yabathengi yokwenyani esidlangalaleni. IPinterest yindawo entle yokubonisa ngokucacileyo malunga namandla kunye nobuthathaka.
Ukuba uphawula umxholo ofanelekileyo, iPinterest inokuthetha iitoni ze-backlinks zomxholo wakho. Xa ucinga ngabathengi bakho abafanelekileyo, cinga ukuba zeziphi ezona zinto zixhalabisayo, zeziphi izinto abazibeka phambili kwaye bangazihoyi, benze uluhlu lwezo zinto, kwaye uqalise ukuzicofa. Sebenzisa amaphulo akho osasazo asekuhlaleni ukuze ufumane ubunzima kwiPinterest, kwaye ungalibali ukuphinda uphinde ucofe umxholo wabasebenzisi bakho.
tags: TwilleySEOWordPressInjini yeWP
Ndisebenza kwi-WP Injini njengeNxusa leBrand ngaphakathi kweWordPress (Capital "P") yoluntu. Ndibhloga kwaye ndenza uqhagamshelo kuluntu lweWordPress.
Injini yeWP ibonelela ngokukhawuleza kweWindowsPress kubaphuhlisi bokwenza iiwebhusayithi ezimangalisayo kubaxumi babo.
UBelinda M. Mathew
Mar 27, 2012 ngo 2:33 PM
Ndisebenzise i-pinterest ukwandisa indawo yam kwaye iziphumo zazimangalisa indawo yam yayixhuma kwi # 234 ukuya kwi # 9 kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Ubuqhetseba kukuba kufuneka iwebhusayithi yethu iphawulwe kwaye igcwaliswe ngabantu abaninzi lelona candelo linzima. Uninzi lwabasebenzisi be-pinterest abayi kuphinda baphendule xa bengafani nezinto esiziphawulileyo.
Ndenza into elula ukuyikhupha kwi fiverr kwaye ndafumana indawo yam iphawulwe ngabantu abangaphezulu kwama-70, andazi ukuba angayenza njani le nto ngokukhangela i-pinterest kwi-fiverr kwaye uyakuyifumana.
Njengoko ndisazi ngoku i-pinterest ilungele i-SEO ngezi zizathu:
1. Nje ukuba iwebhusayithi yethu iphawulwe ine-3 backlinks counts
2. Umdla kuGoogle kwisiginali yemidiya yoluntu ukuze ingaphawulwa njengezixhumanisi zefama
3. Okwangoku amakhonkco e-pinterest ayalandela nkqu nomfanekiso
4.Kwaxhasa isicatshulwa se-anchor, sikulungele ukubeka amagama ethu aphambili
UKim Chariz Levita
Mar 28, 2012 ngo-8: 16 AM
Iposti eyoyikekayo! Uncedo ngokwenene. Enkosi kakhulu ngokwabelana 🙂
Epreli 4, 2012 ngo-4: 51 PM
Ndizama ukuyithanda… kodwa ndibona ixabiso elinguziro kuyo. Kudala ndicofa kwaye ndibandakanyeka kwaye ndifumana okuncinci… ngcono okwangoku, akukho zithuthi kuwo. Ndiyazi ukuba inokubakho, kodwa andikuboni. Onke la mabali "empumelelo" alungile, kodwa ndide ndibone ibali eliyimpumelelo ngenkonzo, andinakuchitha ixesha elininzi apho.
Kukwanabulungisa kubasebenzisi ukuthelekisa ezi nkonzo (iPinterest kunye noGoogle + umzekelo) kuFacebook. I-Facebook inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-820. Akunangqondo. Ndiyazi bambalwa kakhulu abantu abasebenzisa iGoogle + kuloo nto. Inexabiso elininzi njengePinterest.
Ipholile. Kumnandi ukupakisha ezinye izinto kwaye kundinike iimbono ezimbalwa. Kodwa iPinterest ayisiyiyo into etshintsha umdlalo.
Iposti elungileyo nangona. Ibonisa ukuba uyayazi indlela yokusebenzisa iPinterest.
Epreli 4, 2012 ngo-5: 11 PM
Ndizakuba sisivumelwano esiphantsi kule nto xa kufikwa kwingxelo enye… ndenza uthelekiso phakathi kwayo noFacebook. Ngokoluvo lwam, inani labasebenzisi alinanto yakwenza neenzame zethu zokuthengisa. Ngokuchasene noko, nditsala itrafikhi ngakumbi kwiPinterest kunakuFacebook!
Jul 5, 2012 ngo-10: 18 PM
Ngaba kukho iplagi elungileyo ye-pinterst?